Okudingayo ukuqinisa izinhliziyo zezingane
Inkinga enkulu esizukulwaneni esincane yinhliziyo ebuthakathaka. Okokuqala, ixhunywe nokulungiswa ngokomzimba kwengane.
Abazali bajwayele ukuchitha isikhathi esengeziwe ekuthuthukiseni ingqondo, ukulayisha ingane ngaphezu kwezifundo zemibuthano eminingi kanye nokukhethwa.
Kodwa hhayi lokhu kuphela okufakazela ekutheni amandla okwehlisa amandla. Umzali ngamunye uzibuza umbuzo - yini okufanele uyidle ukuze uqinise inhliziyo yezingane? Lo mbuzo uzokusiza ukuphendula izincwadi zokudla noma zesayensi.
Into yokuqala okudingeka uqale ngayo ukuhlanganisa ukudla komntwana. Kungcono uma umntwana ejwayele ukudla ngesikhathi esifanayo, okuzokwenza ngcono ukugaya izici ezitholwe ngumzimba.
Ukunakwa okukhethekile kufanele kuhokhwe ekudleni kwasekuseni.
Ukuqinisa inhliziyo i-oats efanelekayo, izitsha ezizokuvumela ukuthi uthole ukukhokhelwa kwe-vivacity usuku lonke. Ama-oats aqukethe into efana ne-beta-glucan, eyanciphisa inani le-cholesterol egazini lomuntu. Into esemqoka okumele uyikhumbule ukuthi udinga ukusebenzisa ama-oats aluhlaza, njengoba kugobolondo eliphezulu eliqukethe wonke amavithamini.
Yiqiniso, akuzona zonke izingane ezizofuna ukudla ama-oats nje, ngoba nje ziwusizo kakhulu. Kudingekile ukukhombisa futhi udale isidlo esinjalo se-oats, okuyinto izingane eziyozidla ngenjabulo. Isibonelo, kungaba yiphuthuri ngokufaka izithelo ezomile. Ngaphezu kwalokho, izithelo ezomisiwe - lo ngumsizi obaluleke kakhulu ekulwa nesifo senhliziyo.
Ezitshalweni ezomile, eziningi potassium kanye antioxidants, okusiza ukuvikela inhliziyo yengane. Ama-apricot omisiwe (ama-apricot omisiwe), umlimi omuncu, omisiwe, amakhiwane - lena yimikhiqizo enempilo izingane ezidinga nsuku zonke. Izithelo ezomile zingasetshenziswa kokubili ekuphekeni futhi zimane zinike ingane ingane. Bayokwanelisa ngokuphelele indlala futhi bagcwalise umzimba ngezinto eziwusizo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izithelo ezithengiwe ezithengiwe ziphathwa nge-sulfure ukuthuthukisa ukubonakala kwazo. Lokhu kubanika ukukhanya futhi kukuvumela ukuba uhlale isikhathi eside. Kodwa lokhu akusizi, ikakhulukazi kwengane. Ngakho-ke, lapho uthenga izithelo ezomisiwe, khetha lezo ezidabulayo futhi ngaphezulu. Nakuba zingabonakali kakhulu, azizange zitholwe ukwelashwa kwamakhemikhali. Futhi kungcono nakakhulu, uma kunjalo, kukhona ithuba elinjalo, ukulungiselela izithelo ezomisiwe ngokwakho.
Amantongomane ahlanganisa ukulungiswa kwezithelo zomisiwe. Lesi isithako ngeke nje sithuthukise ukunambitheka kwesidlo ngasinye, kodwa futhi sinciphise izinga le-cholesterol engxenyeni yengane, ngaleyo ndlela kusize inhliziyo yakhe isebenze kangcono. Noma yikuphi, kodwa okujwayelekile futhi okungabizi kuyabhekwa njengesiGreki.
Kukhona iresiphi elula futhi esheshayo yesidlo, okuqinisekisiwe ukujabulisa zonke izingane nokuqinisa inhliziyo yakhe. Udinga ukuthatha ambalwa ama-apricot omisiwe, umlimi oqoshiwe, omisiwe. Zonke zigeze ngokucophelela, ziqoshwe kahle. Engeza nut oqoshiwe kanye nenkathi nobusi. Lesi sidlo siwusizo kokubili kwenhliziyo nesisu futhi sithuthukise ukuzivikela emzimbeni.
Ngenhliziyo yengane, nakuwo wonke umuntu omdala, i-glucose iyadingeka, eyondla isisu senhliziyo. Ngakho-ke, izingane kufanele zidle ama-apula, ngoba azidingi kuphela i-glucose yenhliziyo, kodwa futhi i-vithamini C ne-B. Futhi, i-glucose itholakala kuma-cherries nama-cherry, ngaphezu kwalokho, kune-coumarin, okuvimbela ukwakheka kwegazi. Futhi into eyinhloko ukuthi i-coumarin kulezi amajikijolo ayikwazi ukudlula ngaphezulu, okungenakusho ngemithi enale nxenye.
Omunye amajikijolo owusizo okudingeka ukuthi afake ekudleni kwengane, ama-bilberry kanye ne-cranberry. Lawa majikijolo amancane agcwele amavithamini. Iqukethe i-vitamin C, i-antioxidants, ilwa ne-cholesterol. Ngaphezu kwalokho, i-cranberries ithuthukisa inkumbulo, futhi i-ayisikhilimu ithuthukisa amehlo.
Enhliziyweni yomntwana wayenempilo, udinga ukudla imifino eningi. Ukudla nge isipinashi, okuqukethe i-vitamin B9, edingekayo enhliziyweni, kuyongisindisa ingane ekuguleni futhi kuqinise inhliziyo yakhe.
Ungenza isaladi lesipinashi bese wengeza i-avocado. Lesi sithelo siwusizo kakhulu enhliziyweni, sinezinhlayiya ze-monounsaturated, ezinciphisa izinga lokulimaza umzimba we-cholesterol (LDL-cholesterol) futhi kwandisa izinga le-HDL-cholesterol ewusizo. Futhi i-avocados ivumela ukuqoqa amafutha awusizo enhliziyweni. Lesi sithelo siqukethe i-lycopene ne-beta-carotene, okwenza kube usizo kuwo wonke uhlelo lwe-cardiovascular.
Inhlanzi ebomvu kanye nehlathini.
Ukuze ugweme ukukhubazeka enhliziyweni, udinga ukudla izinhlanzi ezibomvu. Inhlanzi ebomvu, ungasho ukuthi, i-panacea yazo zonke izifo zenhliziyo, ngoba iqukethe inani elikhulu lama-fatty acids ama-omega-3. Leli qembu elivumela ukuthi kungcono ukuthuthukisa umsebenzi wenhliziyo, kodwa futhi ukuvumela ukucindezela kwegazi, i-cholesterol encane, futhi kunomphumela omuhle emithanjeni yegazi.
Imbewu yamathanga icebile kulesi sici. Zine-omega-6-fatty acids, i-zinc, eqinisa imisipha yenhliziyo nemithambo yegazi.
I-Omega-3 fatty acids nayo iqukethe ubhontshisi, obubuye bucebile nge-fibre e-soluble ne-calcium. Amabhontshisi nama-lenti ayasiza kakhulu. Isitsha esihle samabhontshisi abilisiwe, agqoke ngamafutha omnqumo, ijusi likalamula - ngcono impilo yengane futhi iyojabulisa ukunambitheka okumnandi.
Ngendlela, amafutha omnqumo futhi anciphisa izinga le-cholesterol eyingozi egazini. Ama-Olive namafutha omnqumo anenani elikhulu lama-acids ewusizo, okudingekayo ukuze kusebenze ngokugcwele kwenhliziyo.
Iprotheni ebalulekile yenhliziyo yesoya, esiza ukunciphisa okuqukethwe kwe-cholestolol ye-LDL eyingozi. Ukuze uthole isidlo sokudla okulinganiselayo, ungalungisa isaladi lama-soy pods (abilisiwe noma aphekwe), ummbila, isipinashi, i-pepper yaseBulgaria, igqoke ngamafutha omnqumo. Ungasebenzisa futhi ubisi lwe-soy nge-oat flakes yekusasa noma ufake i-tofu ushizi, okuwumthombo we-soy.
Ukudla komntwana kuyinkinga ebaluleke kakhulu empilweni yakhe. Kumelwe siqaphe ngokucophelela ikhwalithi yemikhiqizo. Ungadli ngokweqile futhi unciphise ukudla okunamafutha kanye nemikhiqizo yefulawa, njengoba konke lokhu kuholela ekubukeni kwamafutha ezindongeni zenhliziyo, okuyinto eyenza kakhulu umsebenzi wayo.
Ungakhetha kanjani izicathulo zasebusika ezinganeni?
Imisebenzi yobuNyaka Omusha-2015 ngezandla zakho kusuka ephepheni lonyaka weGolf Wood Goat
Unyaka Omusha enkulisa: indlela yokusebenzisa u-Eva ngonyaka ka-2016 enkulisa
Indlela yokukhulisa ingane kusuka ku-dummy
Izimvu Zonyaka Omusha kusuka kwi-discton discs, ekilasini elihle nesithombe
I-Easter yezingane: ukukhethwa kwamageyimu afanayo e-Easter
Indlela yokuhlanganisa umsebenzi nokukhulisa ingane?
Konke mayelana namaphilisi amancane we-Lindax
Ukungezwani komzimba kwamakha
Indlela yokuziphatha, uma izihlobo zizama ukwenza konke ngemuva kweminyango yabo?
Ithonya lokukhulumisana ekuthuthukiseni ubuntu
Ikhasi livikela ngokumelene ne-cellulite
Lokho owesifazane ozwayo lapho kuzalwa kuqala
Izitshalo ezingaphandle: streptocarpus
Okufanele ukwenze uma izinga lokushisa eliphakeme
AmaSaladi Omnyaka Omusha 2018 Izinja, zokupheka nezithombe namavidiyo - amashaveli alula futhi ahlwabusayo
Isaladi nge-ithanga nama-walnuts
Ukuthembela kwengqondo ekuthengeni kunento efana neyomuthi
Ukufaka kusuka ku-Sergei Pynzar: indlela yokususa ngokushesha izimbobo ezisekelweni, ividiyo
Izinzuzo kanye nokulimala kwezithelo
Iqiniso nezinganekwane mayelana nobuhlobo bokuqala